သင့်ရာသီခွင်လက္ခဏာပေါ် အခြေခံပြီး သင်လိုအပ်တာ ဘယ်လို အချစ်မျိုးလဲ? - Lifestyle Myanmar
သင့်ရာသီခွင်လက္ခဏာပေါ် အခြေခံပြီး သင်လိုအပ်တာ ဘယ်လို အချစ်မျိုးလဲ?
မြိုသိပ်မထားဘဲ ငိုကြွေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
လူပေါင်းစုံနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ စောင့်ထိန်းရမယ့်စည်းများ
အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေကို အတိုင်းထက်အလွန် အသုံးပြုခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ
သက်ရှည်ကျန်းမာနုပျိုမှုအတွက် လူသိများတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံများ
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ အပြီးတိုင် ရပ်တန့်လိုက်သင့်ပြီဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေ
မနက်ခင်းအိပ်ရာထချိန်မှာ ဘာကြောင့် ရေတစ်ခွက်သောက်ပေးသင့်လဲ ၊ ရေသောက်ပေးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ
မပြောင်းလဲတဲ့ တစ်နေ့တာတွေကို အပြောင်းအလဲရှိတဲ့ခံစားချက်နဲ့ ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ ပြုပြင်သင့်တဲ့ သင့်ရဲ့ Lifestyle တချို့
Self-confidence လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတက်ချင်သူတို့အတွက် အကြံပြုချက်များ
ရေမွှေးကို အထာကျကျ ဆွတ်တတ်စေဖို့ နည်းမှန်လမ်းမှန်များ
လမ်းခရီးမှာဒုက္ခမရောက်စေဖို့ ခရီးသွားခါနီးမှာ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်ကလေးတွေ
အဖော်မရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်းနေရသူတို့အတွက် အထီးကျန်ခြင်းကို တိုက်ထုတ်နည်း (၄) လမ်း
လူအများရဲ့ လေးစားအားကျမှုကိုခံရတဲ့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သူဆိုတာ ဘယ်လိုလက္ခဏာရပ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလဲ
in Lotaya, Relationship
လူတစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ လက်တွဲဖော်တွေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ပတ်သတ်လာလျှင် အထူးတစ်စုံတစ်ရာကို ရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထဲမှ တချို့က စွန့်စားခန်းတစ်ခုကို ရှာဖွေသော်လည်း အခြားသူတွေကတော့ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ သူတို့လိုအပ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးရှိပေမယ့် သင်လိုအပ်တဲ့အချစ်မျိုးက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာမသိသေးရင် သင့်ရာသီခွင်လက္ခဏာက သင့်အချစ်ရေးမှာ လိုအပ်နေတဲ့ အရည်အသွေးတွေကို ရှာဖွေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၁။ Aries (မတ်လ ၂၁ မှ ဧပြီလ ၁၉)
စွဲမက်သွားစေမယ့် အချစ်မျိုး ၊ သင့်ဘဝကို စွန့်စားခန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးမယ့် အချစ်မျိုး၊ အသက်ရှုမှားလောက်မယ့် အချစ်မျိုး လိုအပ်ပါတယ်။
မိဿရာသီဖွားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်ဟာ ကိလေသာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာကြောင့် အချစ်နဲ့ ပတ်သတ်လာရင် သင်ဟာ တစ်ခုခုကို အရူးအမူးလိုချင်ပြီး အဲဒါက မစစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ ဆန္ဒကို ယူလာပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်ကို ဘယ်သူကမှ မခွဲနိုင်သလို ခံစားရမယ့် အချစ်မျိုးပါ။
၂။ Taurus (ဧပြီ ၂၀ မှ မေ ၂၀)
ရမ္မက်သွေးကြွပြီး ရိုမန့်တစ် ဖြစ်ရုံသာမကဘဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခြွင်းချက်မရှိ ချစ်နေမယ့် အချစ်မျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ သစ္စာရှိပြီး သူတစ်ပါးမနာလိုအောင် ဂရုစိုက်ခြင်းတွေနဲ့ ချစ်တဲ့ အချစ်မျိုးပါ။
ပြိဿတွေအနေနဲ့ သင်ဟာ လက်ဆောင်တွေ ပုံပေးရတာကို နှစ်သက်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရယူလိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်လိုအပ်တဲ့အချစ်မျိုးကို ဖော်ပြရရင် ပိုးသားခင်းထားတဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာ လဲလျောင်းနေရသလို ခံစားရစေမယ့်၊ ဘဝမှာ တခြားသူတွေ နှစ်သက်သဘောကျမယ့် အချစ်မျိုးပါ။
၃။ Gemini (မေ ၂၁ မှ ဇွန်လ ၂၁ ရက်)
ကတိကလွဲလို့ မနက်ဖြန်ဆိုတာ မရှိတဲ့ အချစ်မျိုး၊ နှစ်ယောက်လုံး အေးအတူ၊ ပူအမျှ အတူရှိကြလိမ့်မယ့် အချစ်မျိုး ၊ ဇဝနဉာဏ်ရှိပြီး ရယ်မောခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုး လိုအပ်ပါတယ်။
မေထုန်ရာသီဖွားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်ဟာ စူးစမ်းချင်စိတ်ရှိပြီး ဘဝနဲ့ လက်တွဲဖော်အကြောင်း အဆက်မပြတ် တွေးနေတတ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ နှစ်သိမ့်မှုကို တောင့်တပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ အမြဲရှိနေချိန်မှာ သင့်ကို ရယ်အောင်လုပ်ဖို့ သူတို့ကို လိုအပ်ပေမယ့် အရာအားလုံးကို ဟန်ချက်ညီစေအောင် နေရာလွတ်လည်း ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ သင့်ကို ဘယ်တော့မှ မမွန်းကျပ်စေမယ့် အချစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။
၄။ Cancer (ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂)
ပင်ပန်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပြီးလို့ အိမ်ပြန်ရောက်သလို ခံစားရတဲ့ အချစ်မျိုး၊ ပွေ့ဖက်ထားသလိုမျိုး နွေးထွေးတဲ့ အချစ်မျိုး လိုအပ်ပါတယ်။
ကရကဋ်ရာသီဖွားတစ်ယောက်အနေဖြင့် သင်ဟာ ဘယ်အရာကိုမဆို စိတ်ခံစားချက် တွယ်တာမှုမျိုးကို လိုလားပါတယ်။ သင့်ကို ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မဆုတ်စေမယ့် အချစ်မျိုးကို သင်လိုချင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ နာကျင်မှုတွေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို သက်သာစေပြီး သင့်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခံစားရစေမယ့် အချစ်မျိုးပါ။ မနက် ၃နာရီလောက် သင့်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို လက်ခံပေးမယ့်သူတစ်ယောက်ကို သင်လိုချင်ပါတယ်။
၅။ Leo (ဇူလိုင် ၂၃ မှ သြဂုတ် ၂၂)
သင်တွေးတောင် မတွေးနိုင်အောင် ကြည်နူးမှုတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့အချစ်မျိုး၊ သင့်ဘဝထဲကို နွေးထွေးမှုတွေ ယူဆောင်လာမယ့် အချစ်မျိုးကို သင်လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ကို ထာဝရယုံကြည်စေတဲ့ အချစ်မျိုးပါ။
သိဟ်ရာသီဖွားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်ဟာ ခိုင်မာတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူတစ်ယောက်အဖြစ် ထွက်လာနိုင်ပေမယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ ရိုးရှင်းပြီး ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အရာမျိုးကို လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အတွက် စတစ်ကာမှတ်စုတွေပေါ်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မှတ်စုလေးတွေ ရေးပေးမယ့်သူကို သင်အလိုရှိပါတယ်။
၆။ Virgo (သြဂုတ် ၂၃ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂)
သင်ဟာ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ကိုယ်နှင့်ပတ်သတ်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ပြောပြစရာမလိုဘဲ မှတ်မိနေတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ အလေးထားမှုမျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပိုကောင်းတဲ့ ဗားရှင်းဖြစ်ချင်သူတစ်ယောက်ပါ။
ကန်ရာသီဖွားအနေနဲ့ သင်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကိုယ်နှစ်သတ်တဲ့လူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တိုင်းကို အာရုံစိုက်တတ်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီလိုပဲ လိုအပ်တတ်ပါတယ်။ သင့်သီချင်းကို အလွတ်ကျက်ပြီး သင်နဲ့အတူ သီဆိုမယ့်သူမျိုးပါ။ မင်းကို ဘယ်တော့မှ second-guess မထားခဲ့မယ့် အချစ်မျိုးပါ။
၇။ Libra (စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၃)
အချစ်ဝတ္တုတွေမှာ ရေးကြတဲ့ အချစ်မျိုးပါ၊ စွဲလမ်းမှုကို ကိုယ်မကြုံရမချင်း အစစ်အမှန်လို့ မထင်တဲ့ အချစ်မျိုးပါ။
တူရာသီဖွားအနေနဲ့ သင်ဟာ ရာသီခွင်တွေကြားမှာ အချစ်တတ်ဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ သင်က အချစ်၊ စွဲလမ်းမှုတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သတ်ပါတယ်။ မှော်ဆန်တယ်လို့ ခံစားရတဲ့ အချစ်မျိုးကို အမြဲတမ်း အိပ်မက်မက်နေတတ်တာကြောင့် သင့်ကို မျှော်လင့်ချက်မဲ့ အချစ်ရေးသမားလို့တောင် တစ်ချို့က ယူဆနိုင်ပါတယ်။
၈။ Scorpio (အောက်တိုဘာ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၁)
သင့်အလိုဆန္ဒအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး သင့်ကမ္ဘာကို ဇောက်ထိုးဖြစ်စေမယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်နဲ့ သူတို့ကြားမှာ connection အကြာကြီး ပြတ်သွားသလို ခံစားရစေတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးပါ။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို သိပ်အယုံအကြည်မရှိသူ (သို့) ပွင့်လင်းမှုမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် ထွက်လာနိုင်ပေမယ့် အချစ်နဲ့ ပတ်သတ်လာရင်တော့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ လေးနက်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ သူနှင့်အတူဆိုရင် အားနွဲ့နိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံး ခံစားချက်တွေ၊ ဆန္ဒတွေကို မျှဝေနိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးမှာပါ။
၉။ Sagittarius (နိုဝင်ဘာ 22 မှ ဒီဇင်ဘာ 21)
ရိုလာကိုစတာ စီးရသလို စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အချစ်မျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ ပျော်စရာကောင်းပြီး ထာဝရမငြီးငွေ့စေမယ့် အချစ်မျိုးမှာပါ။
ဓနုရာသီဖွားအနေဖြင့် သင့်မှာအကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီး အလိုအလျောက် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပါတယ်။ သင်လိုအပ်တဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ ရယ်မောပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေရပါမယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျနေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို တောက်ပစေဖို့ သူတို့ကို လိုချင်ပါတယ်။ သူတို့အတွက်လည်း ဒီလိုပဲ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
၁၀။ Capricorn (ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ ၁၉)
သင့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို ယုံကြည်ပြီး အမှောင်ဆုံးနေ့ရက်တွေ တစ်လျှောက်လုံး သင့်အနားမှာရှိနေမယ့် အချစ်မျိုး လိုအပ်တတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တဲ့အခါ မှန်ကန်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ သတိဝိရိယလည်း ရှိပေးပါတယ်။
မကာရရာသီဖွားအနေဖြင့် သင်ဟာ ဆက်ဆံရေးကို အလေးအနက်ထားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကို ပျော်ရွှင်အောင် ကြိုးစားပေးမယ့် သူတစ်ယောက်လိုပါတယ်။။ တစ်ယောက် ရည်မှန်းချက်ကို တစ်ယောက်က ပံ့ပိုးပေးတဲ့နေရာမှာ တန်းတူညီမျှတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးကို လိုချင်ပါတယ်။
၁၁။ Aquarius (ဇန်နဝါရီ ၂၀ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈)
စကြာဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးမှာ သင့်အတွက်သာ အဲဒီလူတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်စေမယ့် အချစ်မျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာကြီးကို အတူတူစူးစမ်းချင်စိတ် ဖြစ်စေတဲ့ အချစ်မျိုးပါ။
ကုံရာသီဖွားအနေဖြင့် သင်ဟာ အပူအပင်မရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေသော လေထုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သင်ဟာ ထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်ပေမယ့် အလွန်ဖော်ရွေပါတယ်။ အချစ်ခံချင်ရုံသာမက စောင့်ရှောက်အားပေးတဲ့ အဖော်အဖက်မျိုးကိုလည်း လိုချင်ပါတယ်။
၁၂။ Pisces (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ်လ ၂၀ ရက်)
သင်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ၊ အနမ်းတွေနဲ့ နစ်မွန်းစေမယ့် အချစ်မျိုးလိုအပ်တတ်ပါတယ်။ relationship ကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်စေပြီး လွှမ်းခြုံထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးနဲ့ပါ။
မိန်ရာသီဖွားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်ဟာ flow နဲ့သွားရတာကို နှစ်သက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သင်လိုအပ်တဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ ဘယ်သူက သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လိုက်ဖက်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကို စကြာဝဠာကြီးအား ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပေးအပ်ထားတဲ့ အဖော်မျိုးလိုပါတယ်။
US မှာအမျိုးသမီးတွေက တစ်လကို (၃.၅) ကြိမ်ခန့် ငိုကြွေး ကြပြီး အမျိုးသားတွေကတော့ တစ်လကို (၁.၉) ကြိမ်ငိုကြွေးကြတယ်လို့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်က ဖော်ပြထားပါတယ်။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်က ငိုကြွေးခြင်းကို အားနည်းချက်တစ်ခုအဖြစ် ယူဆထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငိုကြွေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ခံစားရတဲ့အချိန်မှာ...
အလုပ်မှာလည်း စောင့်ထိန်းရမယ့် စည်းတွေရှိသလို၊ အိမ်မှာလည်း စောင့်ထိန်းရမယ့် စည်းစသဖြင့် နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ သူ့စည်းနဲ့ သူရှိပါတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာရှိတဲ့သူတိုင်းကို မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေ သွားပြောဖို့ မသင့်သလို တဖက်သားရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စရပ်တွေကို သွားပြီးမေးမြန်းဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ မိမိလုပ်နေတဲ့...
ဒီဘက်ခေတ်မှာ လူတိုင်းဟာ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်နေကြရပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ လပ်တော့၊ ကွန်ပျူတာ၊ တီဗီ စတဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ မိုးလင်းမိုးချုပ် အသုံးပြုရင်း အချိန်အများကြီးကို ကုန်ဆုံးနေကြပါတယ်။ ဒီလို အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေကို အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ။ ဖုန်းအကြာကြီးသုံးသည့်အခါ...
ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ အစားအသောက်တွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ ရွေးချယ်စားသောက်ကြတဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိကြပါတယ်။ ဒီနေ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံ အကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ Green Tea ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Green Tea သောက်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိကြပါတယ်။ Green Tea...